I-Hyperbaric I-Oxygen I-Risy Risy - I-Hyperbaric I-Oxygen Treatment HBOT
ikhaya/I-Hyperbaric I-Oxygen I-Risy Risy - I-Hyperbaric I-Oxygen Treatment HBOT
I-Hyperbaric I-Oxygen I-Risy Risy - I-Hyperbaric I-Oxygen Treatment HBOTteknamfg2018-01-21T07:06:03+00:00
I-Hyperbaric I-Oxygen Treatment I-HBOT Risks
Yintoni i Unyango lwe-Oxygen Hyperbaric? I-HBOT yonyango olumiselweyo oluvunywe yi-FDA kunye ne-AMA apho isiguli siphefumula i-100% ibakala lezokwelapha i-oksijini ngelixa uxinzelelo lwegumbi lokunyanga lonyuka liye liphezulu kunomlinganiselo wengxinxwa yolwandle. Oku kunceda ukukhawuleza nokuphucula amandla okwenyama omzimba wokuphilisa. I-HBOT yindlela ekhuselekileyo, engenabuhlungu, engenayo ingozi kunye / okanye isilathiso sokulungisa. Ngokuqhelekileyo, akukho zinkathazo ezinzulu ezihambelana ne-Hyperbaric Treatment Oxygen, kodwa ezinye iingxaki okanye iziphumo ezichaphazelekayo zingabandakanywa nemeko ephambili yokuphathwa.
Indlebe Barotrauma - Ubunzima ngokususa iindlebe kubangela ukuba "kuvele" kwaye kungabangela intlungu ephakathi. I-ear-ear barotrauma iyona nto ifanelekileyo yecala le-HBOT. Isigulane sivimbela i-barotrauma ngokucima izindlebe (ukulinganisa) ngexesha lokuphuma kwegumbi kunye nokunyuka. Ukusetyenziswa kwamanani okunyuka kwamaxabiso omzimba kungasetyenziselwa, okanye, ii-tympanotomy tubes zingasetyenziselwa abo abangenako ukuzithobela ngokuzenzekelayo.
I-Sinus Pain, Izifo eziphezulu zokuphefumula kunye ne-Sinusitis engapheliyo- I-Sinus idibanisa ibonakala ngaphantsi kwe-barotrauma endlebe. Ama-Antihistamines, ama-decongestants, kunye / okanye ukupakishwa kwe-nasal kunokusetyenziswa ngaphambi kokungena kwigumbi. Ngoxinzelelo olucothayo kunye nokunciphisa, ngokuqhelekileyo azikho iingxaki.
IMyopia kunye neCataract - I-Myopia yinto eguquguqukayo yokuchazwa ngokuphindaphindiweyo kwi-HBOT. Xa i-myopia eqhubekayo yenzeka ngexesha loluhlu lwezonyango ze-HBOT, emva kokugqitywa kwezonyango, i-acuity acuity iyatshintsha ngokupheleleyo. Ukukhawuleza kokukhula kwi-cataracts esele ikhona yinkxalabo yokungafihla ixesha elide kwiimeko ezixinzelelweyo kwi-2 ATA. Iingxelo ezishicilelweyo kunye namava aphezulu asekliniki abonisa ukuba i-cataracts entsha ayilunganga kwiinkalo ze-30 kwi-50 zonyango eziqhelekileyo ezisetyenziswa e-USA.
Pulmonary - Ukubonakaliswa kwe-pulmonary and neurological of oxygen enetyhefu kudla ngokukhankanywa njengengxaki enkulu kwi-HBOT. Imida yokunyamezela i-oksijini evimbela ukubonakaliswa ngokucacileyo ukuchazwa ngokuqhubekayo kubantu abaqhelekileyo. Izimpawu zepulmonary azivelwanga ngokutyhila kwimihla ngemihla kwi-2.0 okanye i-2.4 ATA ye-2 okanye ii-1.5 iiyure ngokulandelanayo. Isiganeko se-oxygen convulsions xa sisebenzisa ukutshatyalaliswa okufanayo malunga ne-1 nge-10,000 unyango lwezigulane. Ngaphandle kokuba i-oksijeni ixubana, akukho ziphumo ezinokuthi zithintele ukuba ingagwenywa. Izigulane ezinobungozi be-airway zinomngcipheko wokwanda kwe-pulmary barotrauma ngexesha lokunciphisa. I-barotrauma ye-pulmonary ngexesha lokunciphisa unqabile.
Pneumothorax - Ukuphikisana okuphelayo kwe-HBOT kungaphathwa kakubi kwi-pneumothorax. Ukuphucula ukuphulukiswa kwe-pneumothorax ngaphambi kokuba unyango lwe-HBOT, ukuba kunokwenzeka, lususe umqobo kwonyango. I-x-ray yesifuba ingaba yimfuneko ukulawula i-pneumothorax, ukuba imbali yengxelo yesigulane ibandakanya: 1) Imbali ye-pneumothorax; 2) Imbali yokuhlinzwa ngethambo; okanye i-3) Imbali yokulimala kwesifuba. I-Pneumothorax iyinkcenkceshe, enokubangelwa kukuphefumula ngexesha lokunciphisa.
I-Oxygen Seizures - Isiganeko sokubanjwa kwexinzelelo sichazwe kwi-0.01% yezokwelapha ze-28,700 kwaye ayizange ibikwe ngaphantsi kwe-2.0 ATA ngeyure okanye ngaphantsi. Imbekiselo; U-Davis (1989) uhlalutye izigulane ze-1505 ezaphathwa phakathi kwe-1979 kunye ne-1987 kwaye zafumana iiseshoni ze-52,758 zeeyure ezimbini. I-Oxygen Convulsions yenzeke kwizigulane ze-5 kuphela, (0.009%) bonke abayifumane ngokupheleleyo.
Claustrophobia - I-Claustrophobia, ebonakala ngathi ikhona kwi-2% yabantu bonke, ingabangela ukuxhalabisa okunye. Ukunyanzelisa okunyamekayo kunokumiselwa kulao gulane anxinekile.
Amazinyo - Wonke umsebenzi wamazinyo, iingcambu zengcambu, kunye nezizaliso mazizaliswe. I-barotrauma yamazinyo mhlawumbi inokwenzeka. Izigulane akufanele zifumane unyango ukuba zineengqekembe zengqondo zesikhashana okanye iingcambu ezingapheliyo.
Incwadi Yomhlaza We-Hyperbaric, KK Jain, MD, Vol. 1, 2, 3
I-Hyperbaric Medicine Practice, u-Eric Kindwall, MD
Ukunyamekela Umguli Ofumana I-Hyperbaric Ulwaphulo Lwe-oksijeni, Umqulu Wemiqathango Yokunakekelwa Kwonyango. 1988 Norkool, D
Ulwaphulo lwe-Oxygen Hyperbaric: IKomiti yeKomiti ye1999. UHMS
UkuQinisekisa ukuPhila. I-DAN (i-Alert Network Alert)
UHMS (i-Undersea Hyperbaric Medicine Society)
I-IBUM (IBhodi yeZiko loMhlaba we-Undersea)
I-NBDHMT (iBhodi yeSizwe yeDiving kunye ne-Hyperbaric Medical Technology)